Ummiselo woKhuselo lweZithintelo kwimicimbi yokuvezwa kwezinto eNew York (ikwabizwa ngokuba yi-Free House Defense) - i-NJ & NY yeNdawo yeNdawo, iQela, uKhuselo
ikhaya / Blog / Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew York / UMmiselo woKhuselo loKhuselo kwimicimbi yokuvezwa kwezinto eNew York (ikwabizwa ngokuba yi-Free House Defense)
Agasti 16, 2016 Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoAndres Cardenas
Njengoko kuxoxiwe ekungeneni kwethu kwebhlog yangaphambili exoxa malunga nendlela yokufaka impendulo kwiTrenton yemicimbi yokuphambuka kwiPhondo le-NJ, igqwetha elichasayo uVeer P. Patel lixoxa ngeNgxelo yoKhuselo lweZithintelo kwizenzo zangaphambili.
A ummiselo wemingcele lixesha apho ixesha kufuneka liqaliswe enkundleni. Umzekelo, ukuba ungcoliseko yiminyaka emibini, isuntswana lokwenza ungcoliseko kufuneka liziswe kwisithuba seminyaka emibini sokwenzakala komcimbi ngaphandle kommiselo.
Zimbini iindidi zezinto ezenziwayo ekubanjisweni kobambiso nakumanqaku e-NJ. Esokuqala sisenzo sokuqokelela imali eyonakalisiweyo kwimpahla ebhaliweyo esayiniweyo kunye nemali mboleko. Eli ayisi senzo sokwazisa kwangaphambili, kodwa isenzo sokubuyisela imali ngenxa yenowuthi. ENew Jersey, iinkundla ezahlukeneyo zisingatha imicimbi eyahlukeneyo. Icandelo lezomthetho lisingatha amanyathelo omonakalo wemali, apho ingaziswa khona itikiti lemali kwinqaku. ICandelo leChancery lijonga iintshukumo ezichaziweyo apho isenzo sinokuthi sithengiswe xa kuthengiswa ipropathi kunye nokubambisa ngento kunye nokufumana imali evela kwintengiso ukubuyisela imali ebanjisiweyo.
Kwisenzo somonakalo wemali phantsi kwenqaku lesithembiso, umthetho-siseko wezithintelo eNew Jersey yiminyaka emithandathu kumhla wokuvuthwa ukuba umhla wokuvuthwa uqulathe kwinqaku. Ukuba inqaku alinamhla wokuvuthwa, isenzo kufuneka siqaliswe kwisithuba seminyaka emithandathu emva kokuba ibango lenziwe ukuba lihlawulwe. Ukuba akukho bango lwenziweyo, ke loo nto ngummiselo wokuthintelwa yiminyaka eyi-10 ukusukela ngomhla wokugqibela apho intlawulo okanye inzala yahlawulwa khona. NJSA 12A: 3-118 (a) igubungela le nto ngokwenxalenye.
Ummiselo wokunqunyelwa kwembonakalo yangaphambili e-New Jersey zezokuqala:
Iminyaka emithandathu ukusukela kumhla obekiweyo wokwenza intlawulo yokugqibela okanye umhla wokuvuthwa obekiweyo kwi-mboleko okanye inqaku, ibhondi okanye esinye isibophelelo esikhuselwe ngumbambiso;
Iminyaka ye-36 ukusuka kumhla wokurekhoda ukusuka kumhla wokuphunyezwa, kude kube ngathi ukubambisa ngemboleko ngokwako akuboneleli ixesha lokuhlawulwa ngaphezulu kweminyaka ye-30; okanye
Iminyaka eyi-20 ukusukela kumhla apho umntu obambise ityala etywiniwe kuso nasiphi na isibophelelo okanye imvumelwano ebhalwe kwimali mboleko okanye kwinqaku, ibhondi okanye esinye isibophelelo esikhuselwe ngumbambiso.
Ukuba ubonakele kwaye uza kuthetha negqwetha, tsalela umnxeba kwi-ofisi yethu kwi-18445333367 okanye nge-imeyile [Imeyile ikhuselwe]. Thetha nelinye lamagqwetha ethu ngokubhekisele kumcimbi ophambili wangaphambili free.
Isatifikethi sokuthengisa ngerhafu iNew Jersey
Umgaqo-nkqubo woFuduko-ngokuphumelela kwi-Essay